How'd it happen and more reports?: ဆပ်ပြာခဲနှင့် ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ကျပ် တစ်သိန်းလောကိနှင့် အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်နိုင်ပြီ!
ဆပ်ပြာခဲနှင့် ခေါင်းလျှော်ရည်ကို ကျပ် တစ်သိန်းလောကိနှင့် အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်နိုင်ပြီ!
အရင်းနှီးအများကြီးမရှိဘူးပြောပြောနေတဲ့သူတွေအတွက် တပိုင်တနိုင် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းလေး ?
ငွေကျပ် တစ်သိန်းလောက်နဲ့ ဆပ်ပြာခဲ၊ ခေါင်းလျှော်ရည် ထုတ်လုပ်တဲ့ အိမ်တွင်းဖြစ် လုပ်ငန်းအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
မထက်ထက်အောင် တင်ပြထားတဲ့ သတင်းမှာ ရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံလူတန်းစားတစ်ဦးရဲ့ ဝင်ငွေက မိသားစုလိုက် စားသုံးမှုအတွက်တော့ လုံလောက်မှု မရှိပါဘူး။
ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ အချိန်ပိုလေးတွေမှာ အပိုဝင်ငွေရရှိဖို့ လုပ်ကိုင်လာကြပါတယ်။
ဒါကတော့ အိမ်တွင်းမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ အိမ်တွင်းဖြစ် အသေးစားလုပ်ငန်းကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ ပန်ကန်းဆေးဆပ်ပြာခဲဆပ်ပြာရည်တွေပါ။
Posted by Ko Nge at Sunday, March 12, 2017